वर्षायाममा जुत्ताको हेरचाह कसरी गर्ने? - Everest Dainik - News from Nepal
वर्षायाममा जुत्ताको हेरचाह कसरी गर्ने?
एजेन्सी, वर्षा याम सुरु भइसकेको छ । अब निरन्तर जसो पानी आकाशबाट बर्सीरहन्छ । पानीमा जुत्ता जोगाउन निकै गाह्रो हुन्छ । भिजेपछि राम्रो केयर भएन भने जुत्ता फाट्ने, गनाउने र ढुसी आउने समस्या निम्तिन्छ । कसरी गर्ने त झरीको मौसममा जुत्ताको स्याहार तरिका जानिराख्नुहोस् :
स्पोर्टस् जुत्ता स्पोर्टस् जुत्ता लगाएर झरीमा हिँड्नुभएको छ भने घर फर्किएलगत्तै तुना र तलुवा निकालिदिनुहोस् । पानी राम्रोसँग तैरिएर सुक्न पाउने गरी जुत्ता घोप्टो पारेर राखिदिनुहोस् । भिजेको जुत्ता राम्रोसँग सुकेन भने खराब हुन सक्छ ।
याे पनि पढ्नुस जुत्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै
छाला जुत्ता झरीको मौसममा छाला जुत्ता सकेसम्म नलगाउनु नै ठीक हुन्छ । तर, विशेष कारणवश लगाउनैपर्ने परिस्थिति छ भने वाक्स पोलिस लगाउनु उत्तम हुन्छ । वाक्स लगाउँदा जुत्ताको बाहिरी पातलो पत्र पानीले भिज्दा पनि सुरक्षित रहन्छ ।
प्लास्टिक जुत्ता प्लास्टिकको जुत्ता–चप्पल झरीमा पहिरिनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । यस्तो जुत्ताले पानी नसोस्ने भएकाले पैताला पनि फोहोर पानीबाट सुरक्षित रहन्छ । पानीले भिजेर प्लास्टिकलाई पनि कुनै फरक पार्दैन । झरीमा हिलो लाग्यो भने हल्का ब्रस गरेर सफा गरिदिए पुग्छ ।
रबर जुत्ता झरीमा रबर सुज लगाएर हिँड्नुभएको छ भने घर फर्किएपछि तुरुन्तै पंखाको तल राखेर सुकाउनुहोस् । भिजेको जुत्ता जतिसक्दो छिटो नसुकाए रबरबाट नराम्रो गन्ध आउन सुरु गर्छ र बाहिरी पत्र उक्किने खतरा रहन्छ ।
र, टुंग्याउनीमा: जुत्ता जबसम्म पूरा सुकेको हुँदैन, तबसम्म बन्द र्‍याकमा राख्ने गल्ती नगर्नुहोस् । भिजेको जुत्ता र्‍याकभित्र राखेर बन्द गर्दा ढुसी लागेर जुत्ता खराब हुन्छ । भिजेको जुत्ता बचाउन घामको कडा तापमा सुकाउन सक्नुहुन्छ । यसो गर्दा जुत्ताभित्र रहेका ब्याक्टेरिया पनि नष्ट हुन्छन् ।